Wyszowate, Warmian-Masurian Voivodeship, i-Poland
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Danuta
Konke kumayelana nemvelo! Leli kotishi lezinkuni elihle litholakala ocezwini oluncane lwehlane elingasogwini lwechibi. Inokuthula, itholakala ku-3km ukusuka kumgwaqo omkhulu u-63 futhi izikebhe ezinenjini azivunyelwe echibini. Uzobe uzungezwe izihlahla ezivuthiwe nezinhlobonhlobo zezinyoni nezilwane. Kukhona ugu oluyimfihlo, olunesihlabathi esinedokodo lalo elikhulu elinomumo we-T. Ilungele ukubhukuda, ukudoba, nokuphumula. Ikotishi liyimfihlo, lihlanzekile futhi linethezekile. Iphelele kubantu abathanda imvelo futhi abafuna ukuphumula!
Le ndlu encane yamapulangwe yangasese enendawo yokuziphekela ebheke echibini ukusuka kuvulandi ongaphezu kwendlu kanye nevulandi ngaphezulu. I-Cottage ihlanganisa igumbi lokulala elinemibhede yabantu ababili, igumbi lokuhlala elinemibhede yosofa ababili, igumbi lokugezela elinosinki neshawa, ikhishi elinefriji, isitofu sikagesi nazo zonke izidingo eziyisisekelo zokupheka. Emaqenjini amakhulu kunegumbi elengeziwe elingaphezulu elifinyeleleka kalula ngaphandle elinendawo yokugezela ene-shaver, umbhede osofa nombhede oyedwa, i-balcony enokushona kwelanga okumangalisayo nokubuka echibini. Evulandi une-grill yokuphumula kusihlwa futhi ogwini lwechibi kukhona i-gazebo enezibani zokushisa, itafula elinamabhentshi nomgodi womlilo ukuze ucule ingoma kusihlwa. Endleleni sinamanzi kanye nemishini yezemidlalo yasemgwaqweni eqashisayo / ama-kayak, isikebhe esingavuthiwe, amabhayisikili asezintabeni nasedolobheni/.Eceleni nje kukhona iphawundi elincane elinezimbali nezingcezwana.
4.91(64 okushiwo abanye)
Indawo ingu-1.5 ha, ibiyelwe futhi abekho omakhelwane nxazonke. Kude ngo-3.5 km ukusuka emgwaqeni omkhulu u-63. Kukhona indawo yokudoba yangasese endaweni kanye nendawo encane yokungena esihlabathini echibini. Kunenqwaba yezihlahla nezihlahla eziminyene, amahlathi namasimu akude nomgwaqo omkhulu ophithizelayo.
Mina noma omunye umuntu ngitholakala ngaso sonke isikhathi nasebusuku. Ngitholakala ngocingo noma isivakashi singafika emnyango uma kunesimo esiphuthumayo nanoma yiluphi olunye udaba.
UDanuta Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Wyszowate namaphethelo